Sterling Hayden. Iye anozivikanwa mutambi, mutyairi uye munyori. | Zvazvino Zvinyorwa
Sterling Hayden. Iye anozivikanwa mutambi, mutyairi uye munyori.
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Biography, Novela
Sterling Hayden (1916-1986). Mutambi, mutyairi uye munyori.
Sterling hayden Ndingadai ndakazadzisawo zana ramakore gore rino, asi rakadonha makore makumi matatu apfuura. Aive 1,96 uye aive neiyo akakwana maficha eakaipisisa dema Hollywood. Ndokusaka akagadzira mamwe emhando yepamusoro yeiyo mhando. Asi yaive iyo gamba zvehupenyu hwake. Ini, musikana ane hunyanzvi munzira dzakawanda, ndakave nayo mundangariro dzangu kwenguva yakareba sezvandinogona kurangarira.
Hayden haana kumbobvira ada kuve mutambi. Aida gungwa uyezve aive munyori. Aya ndomaudziro aakazviita mune yake nhoroondo yeupenyu, muchakairi (Vasina pekugara). Akaverengawo yake kuwira mugehena panguva ye Kuvhima varoyi McCarthyist, wake kutukwa yeshamwari dzakanaka nedzadzo kutendeuka saizvozvo. Uye zvakare, akanyora a nhoroondo yenhau, Rwendo, inoverengeka ya1896. Ose ari maviri akanaka.
Wese munhu akaona (uye kana zvisiri, kutambisa nguva kuverenga izvi) imwe Sterling Hayden bhaisikopo. Ndokureva, hazvigoneke kuti cinephile inokodzera kudaidzwa iyo isina kuona Sango rekongiri o Akakwana heist. THE Johnny gitare kana kunyange Muchinda akashinga. Pasina kutaura The godfather (kuvapo kwake ndicho chikonzero changu chete chekumuona), Nhare tsvuku? Takakwira ndege kuMoscow o Novecento. Mune mamwe mazwi, akashanda neakanakisa uye kanopfuura kamwe, saKubrick.
Yayo isingakanganwiki Dix handley, iye nhubu kubva pasi pevhu Sango rekongiri, ndihwo hunhu akaoma uye akarasika par kugona. Asi iye zvakare akanyatsoita iyo Akamira mupurisa uye murume murudo chii chake lieutenant bhiri doyle mukati Mhosva yekuda.
1.1 Nezve hupenyu hwake
2 Rwendo, inoverengeka ya1876
3 Zvinonyadzisa kuti…
Hapana kana chakaipa pakuita mutambi kana zviri izvo zvauri kuda. Asi pane apo iwe paunongoerekana wawana kukosha kwakanyanyisa nekuda kwekuti iwe unoita zvakanaka mumufananidzo uye unokwanisa kutaura nhaurirano yakanyorwa nevamwe. […] Ini handina kukwanisa kutora basa racho.
Sei uchifanira kupinda mazviri ipapo? Uye wadii kubuda? Zvakareruka. Kukanganisa kumwechete muhunhu hwangu kwakanditungamira kuHollywood kwakanditadzisa kupukunyuka.
Zvimwe mukati mutongo wekupedzisira izvo zvakada kutaurwa naHayden muhupenyu hwake, zvakanyorwa muna 1963, zvakapfupikiswa zvishoma. kutendeuka yekumisikidza vamwe vaunoshanda navo uye shamwari mumaseneta akakurumbira ekuvhima varoyi McCarthy. muchakairi Iyo yakatsaurirwa kushamwari yake yepamwoyo, yaakatengesa uye akazofira mutirongo.
Mushure meizvozvo Hayden anga asina kufanana zvekare uye akabvuma kuti kubvira ipapo akararama uye achazogara "achizara neshungu." Nekudaro, aive zvakare ega akareurura iko kutendeuka uye izvo akatambura zvakanyanya nekuda kwekuzvitengesa.
En muchakairi tinosangana ne hayden mushanyi uye murume wekuita. Paaive achiri kuyaruka akasvetuka, akashanda sa musodzi uye akashanda se mufambisi wechikepe.
Mumakore makumi mana akatanga kushanda sa model. Kuwanikwa kune iyo bhaisikopo kwaive kusingadzivisike, saka nguva pfupi mushure mekunge asaina naParamount. Mufirimu yake yekutanga akasangana nemusikana Madeleine Carroll, waakaroora naye. Iye anotaurira iyo episode seinakisisa sezvaari neshungu, sezvaanochema negodo raaive naro. Asi mushure memamuvhi akati wandei uye paakange asati akurisa muHollywood, akasiya arwa mu Hondo Yenyika Yechipiri.
Aive ne hunoshamisa kuita kumberi kweEuropean. Akarwa nevatsigiri veYugoslavia vaMarshal Tito, saka pakupera kwehondo vakamupa iyo Sirivheri Nyeredzi yeYugoslav Republic. Pakudzoka kwake, uye zvinoenderana nehondo iyoyo, se yakabatana neCommunist Party. Asi zvino kuferefetwa kwe Un-American Zviitiko Komiti, izvo zvechokwadi vakaisa ziso ravo paHollywood. Uye sezvatakataura, kubva pakubwinya kuenda pasina.
Paakasiya mafirimu, anga akaroora katatu uye akazvipira kurarama, kunyora uye kufamba muchikepe chake, Ndiani Anoziva (Ndiani anoziva). Mararamiro ake zvaisamboitika uye kufarira kwake doro uye kushandisa zvinodhaka zvakaita se hashish zvakamupinza mumatambudziko anodarika rimwe. Akaita firimu-rimwe chete muma60s uye 70s (The godfather o Novecento). Akanga ave vana vatanhatu uye nemukadzi wake wekupedzisira anga atove wake rufu yekenza mu 1986.
Rwendo, inoverengeka ya1876
Nemapeji anodarika mazana manomwe izvi nhoroondo uye epic epic mutero kugungwa noupenyu huri mukati maro kuti mufambisi wengarava chete ndiye anogona kuziva kuverenga. Hayden akazviita saizvozvo, nguva huru, pamwe zvishoma senge iye aivewo. Simba rezvisikwa rakakundikana simba remukati. Uye kana atove kudzokorora nhoroondo yake yehupenyu yakanga yakanaka, iyo yakagamuchirwa nebhuku iri yaive akasarudzika.
Iyo nyaya inotaurira iyo kuyambuka yechikepe chechina-chakasungwa kubva kuNew England kuenda kuSan Francisco kutenderera Cape Horn. Rondedzero yacho yakawanda mumashoko enhoroondo iyo Hayden ainyatsoziva. Asi pamusoro pezvo, vatambi uye kunetsekana kunoshamisa pakati pavo kwakasarudzika, kunyanya mune yerudo nyaya yemutungamiriri uye mutakurwi Dialogues, tsananguro uye nguva mairi hapana kushaiwa kweshungu uye kusimba.
Ehezve, inongokurudzirwa chete kune vanoda rudzi urwu rwechiitiko uye zvikepe. Iti unayo zvinobata de Melville, London kana Conrad. Chenjera, ini handienzanise. Asi iyo epic uye zviwanikwa mutero kune iwo mazita.
... haabudiswe muSpanish. Asi kana iwe uri unne mamiriro ekuyemura mutambi uyu (seni), we autobiographies or of the zvinyorwa zvakanaka zvegungwa, zvakakodzera kuzviwana. Zviripachena iwe zvakare unofanirwa kuziva Chirungu. Uye pasina kupokana vanouya vanobatsira kuzviita.
Chero zvazvingaitika, zvichave zvirinani nguva dzose kuona imwe yemafirimu ake. Uye zvechokwadi Hayden akaita zvimwe zvakanaka kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » Sterling Hayden. Iye anozivikanwa mutambi, mutyairi uye munyori.
Zvangu zvishanu kuverenga kwe5. Uye zvako?
Yese ndangariro. David Baldacci anotanga mutsva mutsva.